၀၃:၃၄၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ ရက်နေ့က မူ
၁၇၇ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်
၀၃:၃၃၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၃:၃၄၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
ဒါပေမယ့် ထိုစဉ်က စင်ကာပူနဲ့ ပီနန်ရှိ ဥရောပသားတွေက သဘော မတူခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေပြု ကောင်စီက ကျောင်းတည်ထောင်ဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်မှာ ဆာဂျွန် က ဦးဆောင်ပြီး မလေးကျွန်းဆွယ်နှင့် ဖက်ဒရယ် အစိုးရများ ဆေးပညာကျောင်း (The Strait and Federated States Government Medical School) <ref>Khoo, Kay Kim (2005). "The Quest for Recognition". 100 Years: The University of Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia: University of Malaya Press. p. 6. ISBN 983-100-323-3.</ref> ဆိုပြီး စတင် တည်ထောင်ပါတယ်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/364011" မှ ရယူရန်